XOG: Musharax cusub oo kusoo biiray liiska uu Farmaajo ka xulanayo Ra'iisul Wasaaraha | KEYDMEDIA ENGLISH
XOG: Musharax cusub oo kusoo biiray liiska uu Farmaajo ka xulanayo Ra’iisul Wasaaraha
Hanad Cabdullaahi Axmed Caddow, ayaa waxaa dhalay siyaasi caan ah, oo dhowr jeer tan iyo doorashadii C/qaasim usoo tartamayay xilka Madaxweynaha Soomaaliya, balse aan ku guuleysan.
MUQDISHO, Soomaaliya - Wiil uu dhalay Siyaasiga C/llaahi Axmed Caddow, oo lagu magacaabo Hanad ayaa soo gaarey Muqdisho, isagoo kusoo biiray musharaxiinta uu Farmaajo la rabo xilka Ra'iisul Wasaaraha, kuwaasoo soo gudbistay araajidooda [CV].
Hanad oo aan siyaasadda horey uga soo muugan, ayaa la sheegay in looga yeeray Muqdisho, islamarkaana uu kamid yahay shaqsiyaadka ugu cad-cad ee suurta-gal ah inuu Farmaajo maalmaha soo aadan u magacaabo Ra'iisul Wasaaraha dalka.
Mashuraxan u yeertay Villa Soomaaliya ayaa mudo lasoo shaqeeyay hay'adaha UN-ka, waxaana dhalay C/llaahi Axmed Caddow oo 2000 [Doorashadii Carta], 2004 [Doorashadii Embagati, Kenya] iyo 2012 [Doorashadii Muqdisho ee Xasan Sheekh kusoo baxay] usoo tartamaya xilka Madaxweynaha Soomaaliya, balse aan ku guuleysan.
C/llaahi Axmed Caddow oo kasoo jeeda Beesha Habar-Gidir, wuxuu soo noqday labo jeer Safiirka Soomaaliya ee Mareykanka xiligii Dowladdii Militeriga ee Maxamed Siyaad Barre, oo sidoo kale kasoo qabtay 1980 ilaa 1984 xilka Wasiirka Maaliyadda.
Shaqsiyaadka kale ee la hadal-hayo, waxaa kamid ah Prof. Cabdinuur Sheekh Maxamed, oo sida Keymedia Online soo qortay 2 August 2020 uu Farmaajo kula hadlay Taleefonka, isagoo ugu yeeray Muqdisho inuu iska soo xaadiriyo. [Halkan ka akhriso Warbixinta].
Mashquul aad u badan oo habeen iyo maalin ah ayaa ka jira Xafiiska Madaxweyne Farmaajo, iyadoo ay safaf ugu jiraan inay la kulmaan siyaasiyiin, odayaal dhaqameed iyo Madaxda Maamul Goboleedyada, kuwaasoo xusul duub iyo tartan ugu jira xilka Ra'iisul Wasaaraha.
Sida aan wararka ku helayno, Farmaajo ayaa maalmaha soo socda ku dhawaaqi doono Ra'iisul Wasaarihiisa cusub kahor inta uusan aadin Dhuusamareeb oo 15-ka bishan wajiga 3aad ee Kulanka DF iyo Maamullada uga qeyb-gali doono.